I-Saudi Arabia: Akukho lugonyo lwe-COVID-19, akukho Hajj!
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseSaudi Arabia zokuPhula » I-Saudi Arabia: Akukho lugonyo lwe-COVID-19, akukho Hajj!
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • abantu • Xanduva • Iindaba zaseSaudi Arabia zokuPhula • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iimfihlo zohambo • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Amasiko akunyaka ophelileyo ayenqunyelwe kuphela kubahambi ngezonqulo abangama-1,000 XNUMX ababehlala eSaudi Arabia
UMphathiswa wezeMpilo eSaudi Arabia uTawfiq Al Rabiah uthe "ugonyo olunyanzelekileyo" luyakufuneka kubo bonke abahambi beHajj
Amagosa aseSaudi khange achaze ukuba iHajj yalo nyaka, eza kuqala ngorhatya kaJulayi 17, ingabakhuphela ngaphandle abahambi ngaphandle kobukumkani
ISaudi Arabia iqale inkqubo yayo yokugonya ngoDisemba 17, ngeModerna, iPfizer kunye ne-AstraZeneca jabs evunyiweyo ukuba isetyenziswe
UMphathiswa wezeMpilo eSaudi Arabia ukhuphe ingxelo namhlanje, ebhengeza ukuba nawuphina umSilamsi ofuna ukwenza uhambo lweHajj lokuya eMecca kuya kufuneka anike ubungqina obubhaliweyo bokuba bafumene Covid-19 ijab yokugonya.
Kuloo ngxelo, amagosa ezempilo ase-Saudi Arabia athi ukugonywa kuya kuba "yimeko ephambili yokuthatha inxaxheba," emva kokuba uMphathiswa wezeMpilo uTawfiq Al Rabiah uthe "ukugonywa okunyanzelekileyo" kuya kufuneka kubo bonke abahambi.
Onke amaSilamsi anakho ukwenza iHajj ayacelwa ukuba enjenjalo kube kanye ebomini babo. Uhambo luquka uthotho lweentsuku ezintlanu zamasiko azinyaswe ngabantu abazizigidi ezibini eMecca nakwikhaya elijikeleze iMoslem. AmaSilamsi akholelwa ukuba amasiko anika ithuba lokusula izono ezadlulayo kwaye aqale ngokutsha phambi koThixo.
Ubuphathiswa abuchazanga ukuba iHajj yalo nyaka, eza kuqala ngorhatya kaJulayi 17, izakubakhuphela ngaphandle abahambi ngaphandle kobukumkani ukuthintela ukusasazeka kwe-COVID-19. Amasiko akunyaka ophelileyo ayenqunyelwe kuphela kubahambi ngezonqulo abangama-1,000 XNUMX ababehlala eSaudi Arabia.
Ubukumkani buqale inkqubo yabo yokugonya ngoDisemba 17, ngeModerna, Pfizer kunye ne-AstraZeneca jabs evunyiweyo ukuba isetyenziswe.
Ukuza kuthi ga ngoku, amagosa aseSaudi athi kuye kwakho amatyala angama-377,700 e-COVID-19 kwaye ubukumkani buxele malunga ne-6,500 ye-coronavirus enxulumene nokufa.